Accueil > Gazetin'ny nosy > Iavoloha: Mandika ny fifanarahana iraisam-pirenena amin’ny zon’olom-belona
Iavoloha: Mandika ny fifanarahana iraisam-pirenena amin’ny zon’olom-belona
Tsy azo entina miditra eny Iavoloha mandritry ny fifampiarahabana tratrin’ny taona ny finday na ny telefaonina rehetra. Nalefa tamin’ny alalan’ny tranokala izany nanomboka omaly alakamisy faha 04 janoary 2018. Dia nifanontany tena ny rehetra fa misy inona no anton’izao fanapahan-kevitra izao ? Tsy afaka mifandray amin’iza na iza intsony izany ny olona mandeha hamonjy ity fety ity. Ka raha mba misy ny fitadiavana tampoka dia inona no hatao. Raha toa ka misy ny loza mihatra amin’ny fianakaviana na misy fanafihana dahalo na jiolahy any antokatrano any dia tsy misy azo ampitaina ny vaovao. Tsy afaka maka sary amin’ny finday intsony koa izany ny olona mandeha eny amin’ity fety ity. Sambany no nandraisana fepetra henjana toa izao ny mandeha eny amin’ny fifampiarahabana eny Iavoloha.
Amin’izao fotoana izao dia fitaovan-tserasera lehibe amin’ny fiarahamonina ny fananana ny finday na ny telefaonina. Ilaina ny fahitana ny zavatra mitranga rehetra amin’ny fetin’ny firenena toa ireny. Samy manana ny fahitany ny zavamisy ny rehetra ary samy manana ny eritreriny mahakasika izany koa.
Voalazan’ny fanambarana iraisam-pirenena amin’ny zon’olom-belona ao amin’ny andininy faha 19 fa: “ ny olon-drehetra dia afaka manana ny heviny ka hilaza izany an-kahalalahana. Tsy tokony hampitahorina amin’ny fomba fijeriny, ary afaka mikaroka, mandray, mampiely izay vaovao na hevitra hitany amin’ny alalan’ireo fitaovam-pifandraisana misy; tsy hijerena sisin-tany.
Ity fanambarana iraisam-pirenena ity no fototra iorenan’ny lalàna rehetra maneran-tany amin’izao fotoana izao izay niatomboka tamin’ny taona 1948, ary mbola mbola nohamafisin’ny firenena 154 tamin’ny taona 1966. Miaro izany lalàna izany ny fifanarahana rejionaly aty Afrika, Amerika, ary Eraôpa, izay miaro ny zon’olom-belona.
Nahoana no dikain’ny eny Iavoloha ity lalàna ity? Hatramin’izay dia nahazo nitondra finday ny mpamonjy fety teny Iavoloha. Raha toa ka noho ny antony aram-piarovana ny lapa sy ny filoha no asian-teny dia manana mpitandro ny filaminana sy fitaovana azo itiliana izay manana eritreritra izany ny fanjakana.
Any amin’ny tany miady dia mbola hajaina ity lalàna iraisam-pirenena ity ka nahoana no sakanana ny finday hoan’ny mpanatrika fety eny Iavoloha. Ny serasera vaovao dia manome vahana ny “face-book” sy ny tambazotra tsosialy maro isan-karazany ka hoan’ireo izay tsy afaka mamonjy ity lanoana ity dia mba mahita fomba fijery hafa koa ankoatran’izay lazain’ny fanjakana.